२ कोरिन्थी १२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२ कोरिन्थी १२:१-२१
१२ हुन त, घमन्ड गर्नु फाइदाजनक छैन तैपनि मैले यसो गर्नै पर्छ। अब म प्रभुबाट पाएको अलौकिक दर्शन अनि सन्देशहरूबारे कुरा गर्छु। २ म ख्रीष्टको एक जना यस्तो चेलालाई चिन्छु, जसलाई चौध वर्षअघि—शरीरमै हो वा विनाशरीर, म जान्दिनँ तर परमेश्वर नै जान्नुहुन्छ—उठाएर तेस्रो स्वर्गमा लगियो। ३ हो, म त्यस्तो मानिसलाई चिन्छु, जसलाई शरीरमै हो वा विनाशरीर, म जान्दिनँ तर परमेश्वर नै जान्नुहुन्छ— ४ उठाएर प्रमोदवनमा लगियो र उच्चारण गर्न नहुने यस्तो कुरा तिनले त्यहाँ सुने, जुन कुनै मानिसले आफ्नो मुखबाट निकाल्नुसमेत हुँदैनथ्यो। ५ यस्तो मानिसमा म घमन्ड गर्छु तर मेरा कमजोरीहरूबाहेक अरू कुरामा म आफ्नो विषयमा घमन्ड गर्दिनँ। ६ यदि मैले घमन्ड गर्न चाहें नै भने पनि म अव्यावहारिक हुँदिन, किनकि म सत्य कुरा बताउँछु। तर म घमन्ड गर्दिनँ, ताकि मैले गरेको वा बोलेको जसले देखेको छ, त्यसबाहेक अरू कुनै कुराको श्रेय उसले मलाई नदेओस्। ७ मैले ज्यादै धेरै सन्देश पाएको हुनाले कसैले मलाई चाहिनेभन्दा बढी नसम्झोस्। तसर्थ, म घमन्डले नफुलूँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा छेस्को हालिएको छ, जसले मलाई सैतानको दूतले झैं पिरोलिरहेको छ, ताकि चाहिनेभन्दा बढ्ता मेरो प्रशंसा नहोस्। ८ यो छेस्को मबाट हटोस् भनेर मैले प्रभुलाई तीन चोटि बिन्ती गरें; ९ तर उहाँले मलाई भन्नुभयो: “मैले तिमीलाई जति असीम अनुग्रह देखाइसकेको छु, त्यो नै तिम्रो निम्ति पर्याप्त छ; किनकि कमजोर हुँदा तिमीले मेरो पूरा शक्ति पाउँछौ।” तसर्थ, अत्यन्तै खुसी भएर बरु म आफ्ना कमजोरीहरूमा घमन्ड गर्नेछु, ताकि ख्रीष्टको शक्ति ममाथि पालझैं बिछ्याइयोस्। १० त्यसैले म ख्रीष्टको खातिर कमजोरीमा, अपमानमा, खाँचोमा, खेदो अनि कठिनाइहरूमा खुसी हुन्छु; किनकि जब म कमजोर हुन्छु, तब म शक्तिशाली हुन्छु। ११ म अव्यावहारिक भएको छु। तिमीहरूले नै मलाई त्यसो हुन बाध्य पाऱ्यौ, किनकि तिमीहरूले मेरो पक्षमा बोल्नुपर्थ्यो। किनकि तिमीहरूको नजरमा म केही मोलको नभए तापनि तिमीहरूका महाप्रेषितहरूभन्दा एउटै कुरामा पनि कम साबित भइनँ। १२ साँच्चै भन्ने हो भने, तिमीहरूमाझ मैले देखाएको सारा सहनशीलता, चमत्कार, आश्चर्यजनक कार्य र शक्तिशाली कामहरूद्वारा म प्रेषित हुँ भन्ने प्रमाण तिमीहरूले पाइसक्यौ। १३ तिमीहरू अरू मण्डलीहरूभन्दा कुन कुरामा कम भयौ र? सायद यसैमा कि म तिमीहरूको लागि बोझ बनिनँ। कृपया मेरो यो गल्ती माफ गरिदेओ। १४ हेर, तिमीहरूकहाँ आउन म तयार भएको यो तेस्रो पटक हो तर म तिमीहरूका निम्ति बोझ बन्नेछैनँ। म तिमीहरूको धनसम्पत्ति होइन तर तिमीहरूको चाहना गर्छु; किनकि छोराछोरीले आमाबाबुको लागि होइन तर आमाबाबुले छोराछोरीको लागि धनसम्पत्ति थुपार्नुपर्छ। १५ म तिमीहरूका निम्ति हाँसी-खुसी खर्च गर्छु र आफू पनि पूरै खर्चिन्छु। यदि मैले तिमीहरूलाई औधी प्रेम गरें भने के मैले चाहिं थोरै प्रेम पाउने? १६ तर जे होस्, म तिमीहरूको निम्ति बोझ बनिनँ। तैपनि तिमीहरू म “धूर्त” थिएँ र मैले तिमीहरूलाई “छल गरेर” फसाएँ भन्छौ। १७ अनि ज-जसलाई मैले तिमीहरूकहाँ पठाएँ, तिनीहरूमध्ये कसैमार्फत पनि मैले तिमीहरूको फाइदा उठाइनँ, उठाएँ र? १८ मैले तीतसलाई आग्रह गरेर तिनीसँगै एक जना भाइलाई पठाएँ। के तीतसले तिमीहरूको फाइदा उठाए र? हामीले उस्तै मनोभाव देखायौं नि, होइन र? हामी एउटै पदचिन्हमा हिंड्यौं नि, होइन र? १९ हामीले तिमीहरूलाई आफ्नो सफाइ दिइरहेका छौं भनेर के तिमीहरूले यतिन्जेल सोचिरहेका छौ? हामी त ख्रीष्टको चेलाको हैसियतले परमेश्वरसामु पो बोलिरहेका हौं। तर प्रियहरू हो, यी सबै कुरा हामीले तिमीहरूकै उत्थानको निम्ति गरिरहेका हौं। २० किनकि मलाई डर लाग्छ कि कतै म आउँदा तिमीहरूलाई मैले सोचेजस्तो नपाउँला अनि तिमीहरूले पनि मलाई आफूले सोचेजस्तो नपाउला, बरु तिमीहरूमाझ कलह, डाह, रिस, झगडा, गालीगलौज, चुक्लीचाक्ली, सेखी अनि गोलमाल भइरहेको पो भेट्टाउँला। २१ म फेरि आउँदा मेरा परमेश्वरले मलाई तिमीहरूमाझ लाजमा पार्नुहोला अनि पहिला पाप गरेका त्यस्ता धेरै मानिसको लागि मैले शोक गर्नुपर्ला भन्ने चिन्ता मलाई छ, जसले अहिलेसम्म आफ्नो अशुद्धपन, अवैध यौनसम्बन्ध,* छाडा आचरणको * लागि पश्‍चात्ताप गरेका छैनन्‌।
^ २को १२:२१ * अतिरिक्त लेख ४ हेर्नुहोस्।
^ २को १२:२१ * गलाती ५:१९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।